१९:४७, ७ डिसेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन
हिज्जे, typos fixed: शांत → शान्त, ंड → ण्ड, बर्ष → वर्ष (2), बाट → बाट (2) using AWB
१५:३६, ५ डिसेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
१९:४७, ७ डिसेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (हिज्जे, typos fixed: शांत → शान्त, ंड → ण्ड, बर्ष → वर्ष (2), बाट → बाट (2) using AWB)
[[हिन्दू धर्म]]का अनुशार '''कूर्म''' कच्छवातार भगवान विष्णुको दोस्रो रुप हो। कूर्मावतारमा भगवान विष्णुले कछुवाको रुप धारण गरेर समुन्द्र मथन गरिरहेका देवता र दैत्यहरुको उदार गरेका थिए।यो अवस्थामा भगवान विष्णुले तिनवटा रुप धारण गरेका थिए। जसको बर्णन गरिएको छ।
स्वर्गका राजा ईन्द्र एक दिन ऐरावत हात्तीमा स्वार भएर सैर गर्दै थिए अचानक उनको भेट महर्षी[[दुर्बाशा]]सँग हुन गयो। दुर्बाशा ऋषिले देवराजको स्वागातार्थ आफ्नो गलाको माला निकालेर दिँदा भए। देवराज ईन्द्रले माला आफुले न पहिरेर ऐरावत गजलाई पहिराई दिए। ऐरावत मत्था भएर झुलिरहेको थियो अत: माला चुटेर भुईँमा खस्यो र ऐरावत हात्तीको खुट्टा मुनी कुल्चियो। यो देखेर दुर्बाशा ऋषी क्रोधित भएर देवराज ईन्द्रलाई घमंडघमण्ड गरेको भनी राज्य पदच्युतको श्राप दिए। श्रापका कारण स्वर्गमा दैत्यहरुले कब्जा जमाए। दैत्यराज बली स्वर्गका राजा भए। त्यसपछी सँधै जसो देव दानवमा युद्ध हुन थाल्यो देवताहरु सँधै हार्दै गए। एक दिन देवताहरु साह्रै दु:खी भएर ब्रह्माजी ठाउँ गएर प्रार्थना गरे "हे सृष्ठीकर्ता प्रभु ! दानवहरुले पुरा स्वर्ग नै सखाप पार्न थाले दैत्यराज बलिले उल्टो नियम चलाएर हजुरको सृष्ठी विनास गर्दै छन्। कोही उपाए सोच्नु होस् नत्र हजुरको सृष्ठी विनास हुने बखत आयो।" यती सुनेर ब्रह्माजीले सबैलाई विष्णु भए ठाउँ जाने सल्लाह दिए। त्यसपछी ब्रह्माजी सहित देवताहरु भगवान विष्णुको वासस्थान वैकुण्ठ धाम गए। देवताहरुले भगवान विष्णुको प्रार्थना गरेर सबै वृतान्त सुनाए। यो सुनेर भगवान विष्णुले दैत्यहरु सँग मेल गरी समुन्द्र मथनको राय दिए।
समुद्र मथनमा देवता र दानवहरु मिलेर बासुकी नागको [[नेती]] र मन्दराचल पर्वतको [[मथानी]] बनाएर क्षिर सागरलाई दही मथे जस्तै गरी मथ्नु पर्नेछ र यसरी मथिएमा सागरबाट [[अमृत]]को उत्पत्ती हुनेछ। अमृतको प्राप्ती पछि देवताहरुले अमृत खाएर दैत्यहरुसँग युद्ध गरी दानवहरुलाई मारेर पुन: स्वर्ग प्राप्ती हुने कुरा भगवान बिष्णुले बताए। यो उपाय पाए पछि देवताहरु दैत्य राज बली भएको ठाउँमा गएर भनेकी "महाराज! हामी एउटै बाबु [[कश्यप]] ऋषिका सन्तान हौँ। केवल हाम्री आमाहरु फरक भएकाले हामी सौते भाइ भयौँ। हामिले अब आपसमा वैरभाव राख्न उचित छैन हामीहरुले भगवान विष्णुको राय बमोजिम समुद्र मथन गर्नु पर्‍यो जसबाट अमृत प्राप्ती हुने छ। त्यो खाएर हामी कहिल्यै नमर्ने हुने छौँ। हामीलाई भगवान विष्णुले सहयोग गर्नु हुनेछ।" यो सुनेर दैत्यराज बली सहित सबै दानवहरु देवताको योजनासँग सहमती भए। सबै मिलेर मन्दराचल पर्वतलाई उठाएर क्षिर सागरमा लगे। [[बासुकी नाग]] पनि नेती बन्नकोलागी सहमती भए।
मन्दराचल पर्वत समुन्द्रको गहिराईमा डुब्न लाग्यो। यो देखेर देव दानवहरु फेरी बिष्णुको शरण लिन पुगे। भगवान विष्णुले पनि कछुवाको रुप धारण गरेर पर्वतलाई आफ्नो पिठमा अड्काए। समुन्द्र मथन बाटमथनबाट सबै भन्दा पहिले हलाहल नामको बिषको उत्पत्ती भएको थियो हलाहल बिषको असर देवताहरुले सहन सकेनन्। भगवान [[शिव]]ले त्यो हलाहल बिष सबै पिए। शिवले हलाहल खाए पछि उनको घाँटी निलो पर्न गयो। त्यसैले शिवलाई निलकण्ठ भनिएको हो। यसै गरी समुद्र मथन बाटमथनबाट धनकी देवी [[लक्ष्मी]], काम धेनु, रम्भा नामकी [[अप्सरा]], उच्चश्रवा घोडा, भगवान विष्णुको गलामा पहिरिएको कोस्तुभमणी, पारीजात कल्प वृक्ष, आदी 13 रत्न पछि अमृतको उत्पत्ती भएको थियो।
समुद्र मथनमा अमृतको घडा हातमा लिएर भगवान विष्णुले धन्वन्तरीको रुप धारण गरेर आए । हेर्दा शांतशान्त स्वभावका अमृत कलस हातमा लिएका धन्वन्तरीलाई पछि देवताहरुले वैद्य बनाए। हिन्दू धर्म शास्त्रका अनुशार भगवान धन्वन्तरी आयुर्वेदका ज्ञाता मानिन्छन्। अमृत देखेर दानवहरुले पहिले धन्वन्तरीको हातबाट खोसे। फेरी एक आपसमा अमृत कलश खोसा खोस गर्न थाले। देवताहरु हेर्दै रहे। देवताहरुको केही चलेन देवताहरु समुद्र मथेर थाकि सकेका थिए। न त उनीहरुले दानवसँग अमृत माग्न सके न त खोस्न सके। धन्वन्तरी अमृतको कलश दिएर अन्तर्ध्यान भए।
मोहनी रुपी विष्णुले छल कपट गरेको थाहा पाएर दैत्यहरुले फेरी देवताहरुमाथी आक्रमण गरे। देव दानवको भयंकर सग्राम मच्चियो। त्यस बेला देवराज ईन्द्रपुत्र जयन्तले अमृत कलशको रक्षाको जिम्मा लिए। युद्ध पुरा 12 बर्षवर्ष सम्म चलेको थियो। जयन्तले अमृत कलशलाई 12 बर्षवर्ष सम्म4अलग अलग ठाउँमा राखेका थिए। जहाँ जहाँ जयन्तले अमृत कलश जसलाई कुम्भ कलश पनि भनिन्छ लुकाएका थिए तिनै ठाउँहरुमा प्रतेक 12 बर्षमा [[कुम्भ मेला]] लाग्दछ। कुम्भ कलश राखेको ठाउँमा अमृतका छिटा परेको वाश्वास गरिन्छ। देवता-दैत्य युद्धमा अधिक तर दैत्यहरु मारिए अमृत खाएकाले देवताहरु मरेनन्। अन्तमा देवताको विजय भयो देवताहरुले पुन: स्वर्ग प्राप्त गरे। पछि गएर देवताहरुले भगवान कूर्मको प्रार्थना गरे। भगवान कूर्मले देवताहरुलाई "जसले भगवानको आशा राखेर कर्म गर्छ। त्यसैलाई सत्य सूख प्राप्त हुन्छ। जो घमण्ड र अभिमानको सहारा लिएर काम गर्छ त्यसले कहिल्यै पनि अमृत जस्तो सूख प्राप्त गर्न सक्दैन।" भन्ने उपदेश दिएर अन्तर्ध्यान भए।<ref>पृष्ठको सबै सामाग्री सुब्बा होम नाथ केदार नाथ कृत सुक सागरबाट लगिएको</ref>[[Image:ॐ.jpg]]
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/195776" बाट अनुप्रेषित